न खाना पाए न सिटामल पाए जोधी प्रसादले क्वारेन्टीनमा न त पाए पानी नै | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
न खाना पाए न सिटामल पाए जोधी प्रसादले क्वारेन्टीनमा न त पाए पानी नै
( Words)4seconds
तपाईंसँग सानै भए पनि एउटा चल्ने मुटु छ भने जोधी प्रसाद गोडियाको दुःखान्त कथाले त्यसलाई पक्कै विचलित बनायो होला ।
बर्दियाको गोडियनपुरका अतिविपन्न ५५ वर्षीय जोधीराम गोडिया मजदुरी गर्न दुई छोरा सहित अछाम पुगेका रहेछन् ।
महिनौं लामो लकडाउनमा काम र मामविहीन भए । यता गाउँमा परिवारलाई छाक जुटाउन मुश्किल पर्दै थियो । भोकै मर्ने देखिएपछि उनी छोरा र अन्य मजदुरसँगै जेठ नौ गते लकडाउनको अवज्ञा गर्दै घरका लागि निक्लिए ।
मधेशी समुदायका ती मजदुरहरूलाई पहाड़मा बस्तीको बीचमा कसैले देखेर ‘स्वागत’ या सहयोग गर्ने अवस्था थिएन । तिनले चार दिन भोकभोकै जङ्गल पार गरे । कम्तिमा खोलानाला थिए र तिनको प्यास मेटियो ।
तर, दुर्दशा सुरु भयो, आफ्नै जिल्ला आइपुगेपछि । रित्तो गोजी, धुलोमैलो शरीर, गलेको ज्यान र थोत्रा कपड़ामा रहेका तिनलाई यो प्रचण्ड गर्मीमा कसैले खाना त दिएनन् नै, पिउने पानी पनि दिएनन् । झट्ट हेर्दा सरकार र हामी आफैलाई पनि खानै नपाएर त को मर्छ र भन्ने लाग्छ, तर हाम्रो धरातलीय यथार्थ भने भिन्नै छ ।
देशभित्रैबाट आएकालाई घरमै क्वारेन्टीन गर्ने विश्वव्यापी नियम पालना भएको भए जोधी प्रसादले घरमै आफ्नो ज्यान बिसाउने थिए र कम्तिमा तातो पानी पिउन पाउने थिए । तर उनीलाई अन्यसँगै जेठ १३ गते गुलरियाको प्रहरी चौकी लगिएछ । उनले त्यहाँ ठेकेदारले ठगेको ज्याला मागेनन्, बरु एक गिलास पानी मागे । तर कसैले उनलाई पानी दिएन । बेलुका सबैलाई बबई क्याम्पसमा अन्य भारतबाट आएकाहरूसँगै क्वारेन्टीनमा लगियो । त्यहाँ पनि धेरै दिनदेखि भोका उनलाई कसैले खाने कुरा अफर गरेन ।
त्यो रात उनी भोक र तिर्खासँग छटपटिँदै सुते । पहिलो दिन भएकाले आज नभए पनि भोलि पेटभर खाना र पिउने पानी पाइने उनले कल्पना गरेका हुँदा हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस मनमोहन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यी विषयले पाएका थिए प्राथमिकता
तर, दुर्भाग्य त्यो रात सकिँदा उनको शरीरमा बाँकी रहेको सास पनि सकियो । उनी सधैँका लागि अस्ताए । समाचारमा उनी छापिए, ‘क्वारेन्टीनमा एक वृद्धको मृत्यु’ । त्यसपछि त्यो समाचार पनि अस्तायो । ५५ वर्षको कुनै नेतालाई वृद्ध भनिएको सुनिएको छैन, भोकले ५५ वर्षका मजदुरको मृत्युचाहिँ सबैका लागि ‘वृद्धको मृत्यु’ भयो ।
जोधी प्रसादले त त्यो क्वारेन्टीनमा पानी, खाना या सिटामल पाएनन् तर त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीले भने फ्रन्टलाइनमा खटिएको हुनाले पक्कै तलबको शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउनेछन् । केही दिनअघि रातभर उल्टी गरेर छटपटिएका एक युवकको पनि क्वारेन्टीनमा मृत्यु भयो । त्यहाँ पानी पिलाउने सहयोगी या कुनै स्वास्थ्यकर्मी र एम्बुलेन्स नभएकाले युवकको त्यहीँ मृत्यु भयो र दिनभर शव उठाउने मान्छे समेत भएनन् भन्ने पढ़ियो । प्रोत्साहन भत्ता त्यता पनि धेरैले बाँडेर लिए होलान् । देशविदेशमा इष्टमित्र र छरछिमेकी हुनेहरूले सरकार या विदेशबाट समेत सहयोग पाउँदा हुन् तर आजको मितिसम्म गोडियन गाउँमा कोही पुगेको रहेनछ ।
प्रश्न त छन् नि, देशभित्रैका व्यक्तिलाई झन बढ़ी जोखिम हुने गरी क्वारेन्टीनका नाममा किन भीड़मा लगियो होला ? महिनौंसम्म लकडाउन मात्रै गर्ने तर निम्न वर्गीय मजदुरको जीवनबारे कुनै चासो नलिने किन होला ? मान्छेले मान्छेलाई पानी पिलाउनसम्म डराउने अवस्था पक्कै सही सूचनाको अभावले गर्दा हुनुपर्छ । यो हटाउने कसले होला ? पोजिटिभ नै देखिएका व्यक्तिलाई त दुई-तीन मिटरको दूरी कायम गरेर आवश्यक भौतिक सहयोग गर्न सकिन्छ, बातचित गर्न सकिन्छ भने हरेक मान्छेलाई शङ्काकै भरमा छि:छि: दुर्दुर् किन होला ? क्वारेन्टीनमै मृत्यु हुनु हाम्रो समग्र व्यवस्थाका लागि ग्लानिको विषय हो । तर कुनै नेता या प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो विषयले नछुने र यिनको नाम तिनको मुखमा नआउने किन होला ?
खर-खडाइको एउटा झुप्रोभित्र निरन्तर आँसु बगाइरहेकी उनकी श्रीमतीको तस्बीर हेरेर मन कटक्क हुन्छ । सरकारमाथि सबैको विश्वास छ । उनलाई कसैले बोकेर सिंहदरबारसम्म पुऱ्याउने हो भने सरकारले उनलाई पक्कै खाना दिनेछ । तर, शरीरमा एक्सरो राम्रो लुगा नभएको र नेपाली भाषासम्म राम्ररी बोल्न नसक्ने उनलाई सिंहदरबारसम्म पुऱ्याउँछ कसले ? महेश बस्नेत या किसान श्रेष्ठलाई पनि फुर्सद होला नहोला ।
यो पनि पढ्नुहोस यसरी मलहोत्राले नक्कली कम्पनी स्थापना गरेर भ्याट फिर्ता लिए
२२,जेष्ठ.२०७७,बिहीबार ११:१९ मा प्रकाशित
← सुर्खेतस्थित जनता मावि विद्यापुर क्वारेन्टिनमा बसेर घर गएका एक युवकको मृत्यु
काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको संयुक्त बैठक →
पीसीआर टेष्टको नयाँ शुल्क तोक्ने सरकारको तयारी
दैलेखका पहिरोपीडितलाई राहत दिन सभामुख शाहीद्वारा मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीको दाबी, माघ २० भित्र हिउँदे अधिवेशन सुरू गरेर नामाकरण टुंग्याउँछौं
स्वास्थ्यकर्मीले ६ महिनादेखि पाएनन् जोखिम भत्ता, स्वास्थ्य मन्त्रालयले गुहार्यो संसदीय समिति
कोशी अस्पताल, विराटनगरका ४६ जना कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि